Labsa if jijjiirraa Adda Bilisummaa Oromiyaa (A.B.O)—Oromia Liberation Front (O.L.F) – Welcome to bilisummaa
Labsa if jijjiirraa Adda Bilisummaa Oromiyaa (A.B.O)—Oromia Liberation Front (O.L.F)
bilisummaa September 2, 2013	11 Comments
Adda Bilisumma Oromiyaa
Akkuma firaa fi alaagaaniis hubatutti baroota hagoo dura haala faffaca’insa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mudateen qabsaawonni gumaa qaama isaaniifi dhiigaa lafee akkasumaa cinaa qaama ifii warreen gumaacha qabsoo sabaaf godhan gaaga’ama mooraa qabsoo mudate dandamachiisuuf qabsaawonni umrii fi gadaa dheeraa qabsoo sabaa keessa qaban walfunaananii tokkummaa qabsaawota dhugaa fi jaallan shira mooraa qabsoo keessatti yeroo dheeraaf tureen harca’aniis mataa walitti qabee humna qabsoo uumuu fi mooraa qabsoo waaltoytuu firii qabsoo argamsiisuuf Koreen Yeroo ABO umrii bara lamaa olii lakkaawatee as gahee jira.
Ijaarsa fi utaba qabsoo biyya keessaa irratti fuullefachaan irree qabsoo hidhannoo cimsuu akeeka duraa yoo godhatu, gamtaan qabsaawotaa firii qabsoo Oromiyaa walaba baasuu dirqamaas godhachuun caasaa jaarmayaa mirkii hoogansa fiixee irraa hanga sadarkaa hawasaattis hujii godhannee as geenye.
Sababni ifjijjiirraa kuniis akeeka asiin olii kana maadheyfachuun, garuu maqaleen KY-ABO, KD-ABOn kunneen maqaalee faca’insa irraa itti if funaanan malee dhaabataa hin turre. Akkasumaas qaamni yokaan morni maqaa kanaan akkasuma yaadni walmakaan ummataa fi qabsaawota joonjesse xaliilchuu fi dhaabatatti jijjiiramuuf dirqamne. Kuniis KY-ABO Guyyaa Augest 12, 2013 irraa eegalee Adda Bilisummaa Oromiyaa ti.
Jijjiirraan kuni akeeka qabsoo bilisummaa Oromiyaa milkeeysu kamuu hiree caala tolu kan nuuf uumu malee kan gufachiisu akka hin taane mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromiyaa, Jaarmayoota, Mornoota fi jaarmaya hawaasa hundaaf ifa tahuu qaba. Akeekni Mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa waalteysuu fi gamtaa qabsaawota uumuun injifannoo qabsoo Oromoo tan Oromiyaa Walaboomsituun amantaa teenya tan hundeeti.
Gamtaa Qabsaawota uumuun mooraa qabsoo waaltoytuu akeeka qabsoo keenya firii itti gootu tahuu amannee tokkummaa qabsaawota Bilisummaa Oromiyaaf carraaqan waliin tokkummaa shaffisaan fiduu nuti Addi Bilisummaa Oromiyaa akka dirqamaatti yoo fudhannu Gurmuulee fi Jaarmayni akeeka fakkaatta kanarra waliin jirruus akka dirqameeyfatan dhaammanna. Yeroo ibsa kenninuus jaarmayni keenya gamtaa Gurmuu qabsaawota dhugaafi cichoota Walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf gurmaayan waliin gamtaa fi mooraa qabsoo waaltoytuun akkasuma hoogansa kutatoota qabsoo kana furgaasaniin akka utubamtee as baatu abdii fi hawwii firiiti ummata keenyaa fi Qabsaawota dhugaa bira kaayyanna
Sagantaa siyaasaa, Alaabaa fi Fajjiin jaarmayaa qaama kamuufuu ifaafi qalbii gaariin simannaa hawwina.
Previous Accountability in Politics: The case of the Oromo Struggle for Freedom/Liberty
Next OSA’s Letter to Mr. Ban Ki-moon on the death of Engineer Tesfahun Chemeda
Qabsa’ota ummataa yoo taatan maaliif mana keessaa haasoytu ree? qaaman ummatatti gadi bahaa kayyoo keessan ummaticha qabsooftaniif hubachiisaa. Mana keessa taa’an dhokachuun decoration media tolchuun qabsoo hin taatu beekaa. Ummani Oromoo akka duri sana decorationat amanuu dhiiseera. Isin immoo achuma jirtan fakkaattuu, ifatti gadi bahaa ofi beeksisaa
Akkana gaa maqaa fi kayyoon akatti wal fakkachuu qabdii jabaadha Oeomiyaa bilisoomsaa
Adda Bilisummaa Oromoo = mirga ummata Itiyoopiyaa keessati
Add Bilisummaa Oromiyaa = Abbaa Biyyumaa
Viva Oromia Liberation Front
I like this name pls contact me I am with you.
Isin warri nuti ammaallee koree yeroo ABO maqaa keenya daldalan isaaniis nama afuri jettan kuni Obbo Ibraahim Mummee fi Saamiyaa warra shanee gumiiti galle guyyaa kana booda Koree Yeroo ABO hin jirtu jettan labsatan tahuu ifa bahaadha. Haatahuu Oromoonni bifa fedheen if jaaree sadarkaa kamittu qabsoo sabaaf waan danda’e gumaachuun mirga dhaloota fi dirqama oromoota jedheen amana. Oromoonni namna afur ariine isin jettan kuni if jaaree, sagantaa fi alaa akkasuma fajjii qopheefatee if labse maaf dhukkuba isinitti taate? akkasuma Oromoonni kuni kaayyoo fi akeeka Oromiyaa bilisoomsuuf sagantaa isaanii keessatti waan isin qabsooftaniif falleeysa moo maaf diinomfatan? moo shaneti gallaan isiniis oomisha shanee gumii waan taataniif qaroo fi dhala oromoo nuun adda bilisummaa sabaaf qabsaawan diinomfachuu akeeka godhan?Akkasuma ummanni kuni ibsa isaanii keessatti akeeka fi saggantaa sayaasaa isaanii keessati mooraa qabsoo bilisummaa hunda akka humna taatu fi kabajaan ibsa isaanii baasan, yoo ummata gocha diina hojatu fi salphoo tahuu keessan ibsitan malee arrabni keessan ka’umsa galii Oromoonni kuni jaarameef ifduuba waan deebisu natti hin fakkaatu.hujiileen Oromummaa xiqqeessuu fi Oromoo qoqqooduu akkasuma ana malee hundi dhabamuu qaba ju’u ummata oromoo fi qabsaawonni gocha xurii seenaa keessa isin galchuurraa kan hafe hegeree akka hin qabanne if beekuun keessan gaariidha.Salphoon arrabaan jalqabdi, arrabaan xumurti.Amalli mooraa qabsoo keessatti maadhee tolfatanii Lubbuu qabeenya Oromoo fi Qaroo sabni kuni horate mara ajjeessuu dirree qabsoo keessatti maqaa ABOn ture san arraas akkasuma hawwuu keessan ni mul’ata. gocha Ilmaan Oromoo Maqaa ABOn IFLO, QC, OPLF,IBSO fi kan biraan Oromoota gocha diinummaa jaarmya kana keessatti dalagamaa ture didanii Bilisummaa Oromoof xurree falmaa uuman hunda qaroo meeqa akkaa qawwee diinaan osoo hin tahin kan firaa kumaantama galafatame san arraan achi akka itti hin milkoofne beeka, Oromoo diina keessafi jaleelee maqaa dhaabba kanaan kichuu Oromoo meeqa du’e madaan suni akka arrallee haaraya taate hubachuutu isinirra jiraa hubadhaa Oromoo dhiisaa qabsoo yerooniis digaluu akka keesanii kana tuftee jirti guyyaan ummata keessan keessa bobbahuun isin qaanfachuusu yeroon amma tahuu beekaa.Farreenii fi Diinne Qabsoo ummata Oromoo galii irraa hin oolchu!!Oromiyaan Ni Walaboomti!!
Kayyoo fi maqaan wal fakachuu maatu irra jira.
Sa boo Adda Bilisummaa Oromoo jechuun warra ethiopia keessatti mirga barbaadu jechuudha, dubbiin amma adaan naaf batee bar rephee lolaan biyya barbaadu hundi maqaa biyyaatiin sissohaa duranuu tanaaf maqaa ummatatiin baafatan wow.
Mee namuu dhaaba ijaaruu warri feetan maqaa, sagantaa siyaasaa, Alaabaa fi faajjiilee ABO irraa fagaadhaa kan ofii keessanii uummadhaa. Ummata afaanfaajjessu irraa of qusadhaa.
Mee warri kun sagantaa fi maqaa qulqulluu beysifatanii maal isin irraa malee isiin hin tuynee irraa suuta ajadhaa Shanee bololtuu.
september 4/2013 viva oromiya kan hojii calee jalaa deemna
Bunjunjuressituu ergamtoota wayyanee ! Akkataa isin ergaa keyssan ademsistan ni bekna waan ta’ef gab jedhaa taa’aa. Deebii isini kennedhaf yaadni kessan dheedhii dha waan ta’ef yeroo isini kennu hin barbaachisu
Elemo isiin Shanee malee Oromoon hundi ergamtuudha? Haati hatuun ilmoo hin amantuu jetti Oromoon. Hujiin teessan Oromo dura shaabachuu moo, diina dura dhaabachuudha?